Impendulo yombuzo "indlela yokwenza ukukhiqizwa inzuzo" zingatholakala kulesi sihloko. Nokho, umfundi namanje uhlala kukhethwa ibhizinisi.
Ekwakhiweni imigomo yebhizinisi
Ngaphambi kokuya ibhizinisi sina, usomabhizinisi kumele kuqala ukunquma ukuthi yini eza kuqala ngaye ngokwakhe: ukukhulisa inzuzo noma wokuzilibazisa owuthandayo. Akulungile, okungukuthi isisekelo sanoma ibuphi ibhizinisi dolobha uqale-up. Lokhu akwanele. Kufanele futhi ibhizinisi plan esicacile, okuyinto ukukhiqiza okungcono ukuheha ochwepheshe. Phela, kuyodingeka ukuba sihlaziye iningi izici ezingase nomthelela, okuyilezi: nezimo zezimakethe, inani kungenzeka inzuzo, izinkinga ezingase bhekana umuntu, futhi inani lotshalo mali.
Kukhona ezinye imigqa emikhulu ibhizinisi: ukuhweba, ukukhiqiza, izinsiza kanye kucocisana. Kulesi sihloko sibheka ukukhiqizwa oholela kangcono amabhizinisi amancane.
Lapho enenzuzo kakhulu ekukhiqizweni? Yiqiniso, embonini yezokudla. Kulokhu, ukukhathazeka main usomabhizinisi bazonikeza mini-embonini izinto zokusetshenziswa nokudayiswa imikhiqizo isiqedile. Phela, kuyinto umsebenzi yokugcina isisekelo impumelelo yanoma ibhizinisi. Nquma ukuthi ukwenza ukukhiqizwa inzuzo - kusho ukuthola izindlela nokwandisa izindleko zokukhiqiza. Kuphela ngale ndlela usomabhizinisi uzokwazi ukuthola inzuzo enkulu, okuyinto iyini injongo eyinhloko yiliphi ibhizinisi.
Esigabeni sokuqala ibhizinisi
Ekusebenteni, eziningi ongakhetha kunoma yiziphi izindaba zabo. Okokuqala, umnikazi angafaka isicelo izinhlelo ukwesekwa kazwelonke olufanele owawuthi amabhizinisi amancane zinikezwa izinzuzo e ukuthengwa imishini ihhovisi noma amagceke sokuqasha. Kulokhu, imininingwane enjalo inhlangano ukukhiqizwa idinga ukuba kucaciswe karhulumende wendawo, amahlelo anjalo ngokuvamile kukhona lesifunda ngokwemvelo.
Hlela ukwenziwa enenzuzo kakhulu kungenzeka futhi ngenye indlela - ukuqala ibhizinisi lakho siqu "kusukela ekuqaleni". inketho okunjalo kuhambisana nezinkinga ezithile kungase akudzingi umtfombo wemali eyengeziwe kanye nesikhathi.
Le nguqulo esilandelayo ikhambi umbuzo "indlela yokwenza ukukhiqizwa inzuzo" - ukuthenga ibhizinisi ngomumo eyenziwe. It uya endleleni, usomabhizinisi Ufika izisebenzi, emafektri kanye izakhiwo zezimboni oqeqeshiwe. Ngamanye amazwi, indlela yokusebenzisa i ithengiswe ngomumo. Usomabhizinisi kuphela ibhizinisi ukulondoloza nokuthuthukisa ngokuzayo.
Uhlobo inzuzo kakhulu ukukhiqizwa
Kuyinto Eqinisweni obungenakuphikwa bokuthi imikhiqizo athandwa kakhulu phakathi kwabantu, kukhona amadombolo. Abakwazi ukondla umkhaya esihlwabusayo fast. Lokhu preform buthola ukwazisa phakathi abathengi. On ekuwulungiseleleni ayidingi isikhathi esiningi, okuyinto ebalulekile isikhathi sethu esinzima, esibonakala by umsebenzi omkhulu.
Esinye isici esihle waleli bhizinisi yilona ukubuya okusheshayo ku ukukhiqizwa ravioli (phakathi nonyaka). Lena naphezu mncintiswano umxhwele.
izigaba ezalandela ukuqala ibhizinisi
Kuphela kwencazelo izimpendulo main yombuzo "indlela yokwenza ukukhiqizwa inzuzo," ungakha ibhizinisi ngempumelelo ezokwenza imali eyanele. Eyokuqala yalezi zinkinga kuyinto inhlangano efanele kwehholo ukukhiqizwa. Esigabeni sokuqala is klamo imibhalo amandla futhi Ukukhetha izakhiwo ezifanele. Kuyadingeka ukuhlinzeka ezinye izici sina. Okuhlangenwe nakho kubonisa ukuthi indawo ukukhiqizwa akunandaba ngempela. Ungakwazi ukuqasha igumbi ngomumo, kodwa ungakwazi ukuthenga ngaphandle komuzi ke. Kumele kwenziwe futhi ekamelweni ezengeziwe ifakwe nokuqondisayo ezinkulu, okuyinto elizoba ishede. Uphi ngqo bafeza ukukhiqizwa ravioli, kufanele ihambisane nemithetho kwenhlanzeko nge ukubhaliswa izimvume okuhambisanayo.
Ngakusasa osemqoka enhlanganweni ukukhiqiza imishini. Ziyadingeka ekukhiqizeni:
- mixer umshini eyenzelwe kweqa izinto zokusetshenziswa;
- kudivayisi ufune ufulawa;
- countertops eziningana;
- Sander Industrial;
- umshini ravioli.
Ukuze imishini yamuva ohlwini kumelwe lithathwe ngokungathí sina, njengoba kuncike kuye impumelelo ukukhiqizwa. Okunye futhi okubaluleke ngokufanayo isimiso ukusebenza kwawo, ogxile izinga umkhiqizo osuphelile, kanye nekhono layo ukucubungula esiningi izinto zokusetshenziswa.
Coatings izizathu ezemidlalo
I Coefficient kuyaqina isidingo
Windows esiqandisini Pole
Amafomu enhlangano nezinhlaka zomthetho wamabhizinisi. Ngebuhle nebubi.
"Felodipine": yokusetshenziswa, ukubuyekezwa. izidakamizwa analogue
Phumula eCrimea: ezishibhile, ukudla nenduduzo
Izinwele Ingrown. Yini okumelwe uyenze?
"Vilprafen 500": incazelo, isicelo kanye nezinkomba
Izandla ezenziwe ngamathayi angeke zenziwe kuphela ngehlala ehlobo
Urethritis ezingabantu: Ubangela, Izimpawu kanye Ukwelashwa Izindlela